family Archives - Kanaung News
သားသမီးအသိဥာဏ်နဲ့သားသမီးခံစားချက်ကို လူရာမသွင်းခဲ့ဘူးလား
သားသမီးအသိဥာဏ်နဲ့သားသမီးခံစားချက်ကို လူရာမသွင်းခဲ့ဘူးလား “ဟိုကောင်ကျောင်းပြေးတယ်ဆို ခွေးသူတောင်းစားလေး ဘယ်လောက်ရိုက်ရိုက်မမှတ်ဘူး”ဘယ်ကသတင်းရလာသည်မသိ အိမ်ထဲကို ဒေါနဲ့ မောနဲ့ ဝင်လာသော ခင်ပွန်းသည်ကို မိမိပါရောလန့် နေမိ သည်။ ”အဲ့အကောင်ဘယ်မှာလဲ” ”ပြန်မလာသေးဘူးယောကျာ်း” ”အရည်ခွံစုတ်ပြီမှတ် ပြန်လာရင် နင့်သားကို ကြိုးနဲ့ ချည်ထား” ခြံဝန်းထဲသို့ ရောက်နေပြီဖြစ်သော ခင်ပွန်း၏အစ်ကို မိမိ၏ခဲအိုကို မမြင်ပဲဒေါသအိုးကြီး ပေါက်ကွဲနေသည်ခဲအိုဖြစ်သူက ”တိုင်မှာကြိုးချည်ပြီး ဘာလုပ်မလို့ လဲ ကွ” ”ဟာ အစ်ကို .. ဘာလုပ်ရမှာလဲ ရိုက်မလို့ ပေါ့ အစ်ကို့ တူ ကျောင်းပြေးတတ်နေပြီ ဒီကောင်က ပါးစပ်နဲ့ ပြောရင် ရမယ့်ကောင်မဟုတ်ဘူး ရိုက်မှမှတ်မယ့်ကောင်” ”မင်းကအခုမှ စရိုက်မှာလား တစ်ခါမှ မရိုက်ဖူးဘူးလား” ”ရိုက်တာပေါ့… ဒီကောင်က အမှတ်မရှိတာ ဒီတစ်ခါတော့မှတ်သွားအောင်ရိုက်ပစ်မယ်” ခယ်မဖြစ်သူကိုကြည့်တော့ […]
မိတ်ဆွေကောင်းထားသူများကျန်းမာရေးကောင်းမည် ခင်မင် အားကိုးရသူ မိတ်ဆွေကောင်းများရှိ ထားခြင်းသည် စိတ်ကျန်းမာပျော်ရွှင်ရေး အတွက် ဆုလာဘ်ကောင်းကြီး ဖြစ်ကြောင်း အားလုံး သိကြသည်။ ယခုတစ်ဖန် သြစတြေးလျ သုတေသန ပညာရှင်များ၏ စစ်တမ်းတစ်ရပ် အရ မိတ်ကောင်းဆွေမွန် ပေါများခြင်းသည် အသက်ရှည်ရာရှည် ကြောင်းလည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပြန်သည်။ သြစတြေးလျ လူ့သက်တမ်းဆိုင်ရာ ညွှန်းကိန်းများကို ပညာရှင်များက နှစ်ပေါင်းများစွာ နောက်ကြောင်းပြန်ကာ စာရင်းကောက် လေ့လာခဲ့ ရာမှ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းပေါများခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးကောင်းခြင်းကြား ဆက်စပ်ချက်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်ကစပြီး ယခု နောက်ပိုင်း နှစ်များထိ လေ့လာခဲ့သည်။ စစ်တမ်းတွင် အသက် (၇၀) နှင့်အထက် လူပေါင်း (၁၄၇၇) ဦးပါဝင်သည်။ ထိုသူများ၏ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး၊ လူမှုဝန်းကျင် အနေအထား၊ […]
Posted in: Articles, FamilyTagged: Articles, familyLeaveacomment
တစ်ခုမှ မလပ်သော တစ်ခုလပ်များ အများစုက တစ်ခုလပ်ဆိုတဲ့ ဘဝကို လက်မခံရဲ ချမပြရဲကြတာ တွေ့ရပါတယ်…..တစ်ချို့ကတော့ မိမိဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းအလယ်မှာ ရှက်ရွံ့အားငယ်လို့ လူတောမတိုးရဲ….. တစ်ချို့ကျတော့လည်း နောက်ထပ် အိမ်ထောင်တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အရင်အတိတ်ကို ချပြဖို့ သတ္တိမရှိလို့ ဖုံးဖိဖို့ ကြိုးစားရင်း အမြဲတမ်း လိမ်ညာနေရတဲ့ အဖြစ်ကိုရောက်….. တကယ်ဆို အဲ့ဒီလို ကိုယ့်ဘဝအမှန်ကို ချမပြရဲတာ အရမ်းကို မှားတယ်လို့ ကျွန်မ ယူဆပါတယ်….. တစ်ခုလပ်…. ဘာဖြစ်လဲ….. ဘာရှက်စရာ….. အားငယ်စရာ လိုလဲ…..????? ကိုယ့်အမှား/ ကိုယ့်အပြစ်မရှိဘဲ ကွဲခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဆို ပိုတောင် ဂရုစိုက်ဖို့ မလိုဘူးလို့ ယူဆပါတယ်…. ဒါပေမယ့် ခက်တာက မြန်မာ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ အချို့အချို့သော သူတွေက တစ်ခုလပ်တို့ / မုဆိုးမတို့ ဆိုတာကို […]
ပြည့်စုံ ကောင်းမွန်တဲ့ Relationship ပြည့်စုံ ကောင်းမွန်တဲ့ Relationship တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ လူနှစ်ယောက်လုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဒီအချက်တွေက အထောက်အကူ ပြုပေးမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ကျန်းမာကောင်းမွန်သော ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အတွက် လမ်းစများ။ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ ချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာမှာ တယောက်ပေါ်တယောက် အဖုအထစ်မရှိဘဲ ပြေပြေလည်လည် ရေရှည်မှာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းအချို့ကို မျှဝေ လိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လို နည်းလမ်းကောင်းတွေ ပါဝင်မလဲ ဆိုတာကို ကြည့်ကြရအောင်။ ပထမဆုံး အချက်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်မေးရမှာပါ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဆီက ကိုယ်က ဘာတွေကို လိုချင်လိုအပ်ပြီး သူတွက်လဲ ဘယ်အရာတွေကို ကိုယ်ဘက်က ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ဒီလိုသိပြီ ဆိုရင်တော့ သင်တို့ နှစ်ယောက် […]
“ပိတ်လှောင်ခံထားရတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း” ကျွန်တော့်ဆရာတစ်ယောက် ပြောဖူးပါတယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့ လူ့မှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ဆေးကုသမှုပေးရင် အမေးခံနေရကျ မေးခွန်းတစ်ခု ရှိသတဲ့၊ ဆရာပေးတဲ့ဆေးကြောင့် ကျွန်တော်၊ ကျွန်မရဲ့ လိင်မှုကိစ္စ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်သလား ဆိုတာပါပဲ။ ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆို ဆေးအမျိုးအစားပြောင်းပေးရတယ်၊ ဒီရောဂါက လိင်မှုကိစ္စကို ပြဿနာပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် လူတွေက ပိုပြီး ကုသမှုကို ကြိုးစားခံယူလာကြတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် တွေးစရာတွေ အများကြီးရသွားပါတယ်။ သြော် သူတို့တွေများ ပွင့်လင်းလိုက်တာ။ ကျွန်တော့်ကိုသာ လူနာက အဲ့လိုလာမေးရင် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ၊ ဟင် ဒီလူကြီး တဏှာကြီးရန်ကော၊ ဒီအရွယ်ကြီးကျမှ၊ ဒီလိုထင်မိမှာပဲ။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ နိုင်ငံခြားသူမိတ်ဆွေတချို့ကိုလည်း မြင်ယောင်လာတယ်။ သူတို့ဘ၀က ပျော်စရာပဲ။ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ရှိတယ်။ အိမ်ထောင်မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် Living together နေနေတဲ့အဖော်ရှိတယ်။ […]
အသက် ၃၀ ၀န်းကျင်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ မမတွေက အသက် ၂၀အရွယ် ညီမငယ်တွေကို သိစေချင်တဲ့ အရာများ
အသက် ၃၀ ၀န်းကျင်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ မမတွေက အသက် ၂၀အရွယ် ညီမငယ်တွေကို သိစေချင်တဲ့ အရာများ သင့်မှာသာ အစ်မအရင်း တစ်ယောက်လောက် မရှိဘူးဆိုရင် အပျိုဖြစ်ခါစ အရွယ်၊ နောက် လူတွေနဲ့ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ဆက်ဆံရမယ့်အရွယ်၊ အလုပ်ခွင်အသီးသီးကို ၀င်ခါစ အရွယ် စတဲ့အရွယ်တွေမှာ ဘာတွေလုပ်ရမယ်၊ ဘာတွေရှောင်ရမယ်၊ ဘယ်လိုအရာမျိုးတွေတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး ဆိုတာမျိုး ထောက်ပြပြောဆိုပေးမယ့် အစ်မတစ်ယောက်လောက်တော့ လိုချင်မိကြပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကသာ သူတို့ကြုံတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဝေမျှပေးမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာ ထင်သလောက် မခက်ခဲတော့ပါဘူး။ ဘ၀အသိတွေလည်း တိုးပွားလာမှာပါ။ ဒီတော့ အသက် ၃၀အရွယ်မမတွေက အသက် ၂၀၀န်းကျင် ညီမလေးတွေကို သိစေချင်တာက ၁။ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါ။ တခြားအမျိုးသမီးတွေကို မဝေဖန်ပါနဲ့။ အပြုံးတစ်ပွင့်စီ၊အရယ်အမောတစ်ချက်တိုင်း၊ မျက်ရည်တစ်စက်တိုင်း ရဲ့ […]
ကလေးများကိုမရိုက်ပါနဲ့့ ကမ္ဘာ့အကြီးကျယ်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အိုင်းစတိုင်းဟာ ငယ်ငယ်က စကားမပြော တတ်ခဲ့ပါဘူး ၅နှစ်ကျော်မှသာစကားစပြီး ပြောတာပါ.. နိုဘယ်လ်ဆရုရှိခဲ့တဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာ ရှင်ကြီးတဦးဟာလည်း ငယ်ငယ်က အတန်းထဲမှာအသုံးမကျဆုံးသူလို့ဆရာ ဆရာမတွေရဲ့သတ်မှတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသူပါ.. ဘုရားရှင်လက်ထက်က စူဠပန္ထကဆိုတဲ့ မထေရ်ကြီးဟာ အက္ခရာ ၄၄ လုံးကို ၄ လကျက်တာတောင်မရခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ ရဟန္တာ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်.. ကလေးများရဲ့ဥာဏ်ဟာ လူကြီးအတွေးနဲ့မရပါဘူး။တခါတရံမှာ အတိတ်အကြောင်း ကြောင့်ဆိုတာကိုလည်းထည့်တွက်ကြရ မှာပါ။ ကိုယ်အလိုမကျတဲ့ ရိုက်ပုတ်နေရင် တော့ဖြင့် အဲဒီကလေးရဲ့ဘဝဟာ ဆုံးရှုံး သွားနိုင်ပါတယ်။ ၅ နှစ်မပြည့်တဲ့ကလေး တဦးကို ကိုယ်ကနောင်ပြင်အောင် ရိုက် ပုတ်ဆုံးမပေမဲ့ သူ့ ရဲ့ဥာဏ်ဟာ ရိုက်လို့နာတယ်ဆိုတဲ့အသိကလွဲလို့ ပြင်မယ်ဆို တဲ့အသိမရှိသေးပါဘူး။ ကြောက်စိတ်က […]
သီတင်းကျွတ်အပြန် (အခန်း – ၁) သီတင်းကျွတ်တော့မည်။ သီတင်းကျွတ်ခါနီးပြီဆိုသည်နှင့် ကျွန်တော် ပထမဆုံးလုပ်သည့်အလုပ်သည် ခြံထဲတွင် ကျင်းလေးများ တူးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျင်းတူးသည် ဆိုရာတွင် အချင်းနှစ်လက်မ ကျယ်ပြီး နှစ်လက်မခန့်နက်သော ကျင်းငယ်လေးများကို ခြံစည်းရိုးနှင့် ကပ်လျက်ရှိသော မြေကြီးတွင် တူးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ခြံထဲရှိ ဗာဒံပင် တွင် ဗာဒံရွက်ကြီး အရွက်ကြီးမည်မျှခန့် ရနိုင်သည်ကို လေ့လာမည်။ သို့နှင့် သီတင်းကျွတ် အဖိတ်နေ့၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ နှင့် လပြည့်ကျော်တစ်ရက်နေ့များတွင် အဆိုပါကျင်းများထဲတွင် ဖယောင်းတိုင်များ စိုက်လျက် ဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင်ချင်းစီကို ဗာဒံရွက်များဖြင့် ပတ်ပတ်လည်ကာ ကာ မီးထွန်းတော့သည်။ အနီးကပ်ကြည့်လျှင် အဆိုပါကဲ့သို့ မီးထွန်းမှုမှာ ထူးခြားမှု သိပ်မရှိသော်လည်း အဝေးမှ ကြည့်လျှင်၊ အထူးသဖြင့် ခြံပြင်မှ ကြည့်လျှင် အစိမ်းရောင်မီးပုံးများကို မြေကြီးတွင် […]
” မှီငိုစရာ ပခုံးကလေး “
” မှီငိုစရာ ပခုံးကလေး “ (၁)အခန်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ စတိတ်ရှိုးတွေမှာ သုံးသည့် အသံချဲ့စက်မျိုးတွေ တပ်ဆင်ထားသဖြင့် ဆူညံနေသည်။ စတိတ်ရှိုးနှင့် မတူတာကတော့ ဆိုနေသူတွေက အသံမကောင်းတာပါပဲ။ ‘အကူဆို’ ဆိုပြီး လာထိုင်နေသည့် မိန်ကလေးအများစုက အသံကောင်းကြသော်လည်း ကိုလှိုင်မြင့်တို့ အဖွဲ့က တစ်ယောက်မှ အသံမကောင်း။ ကောင်းမလား။ အားလုံးအသက်လေးဆယ်ကျော်မှ စ ဆိုသူတွေချည်း။ ပြီးတော့သောက်ကလည်း သောက်ထားကြသေးသည်။ ဗိုက်အင့်လောက်အောင်လည်း စားထားကြသေးသည်။ သည်ကြားထဲမှာ မိန်းကလေးတွေက ဗိုက်ဆာနေပြီဟု ပြောကာ ထပ်မှာကြတာတွေကလည်း ရှိသေးသည်။ မှောင်ပျပျ ဆူညံနေသော အခန်း၏ တံခါးကလေး ပွင့်ကာ စားပွဲထိုးလူငယ်တစ်ဦး ဝင်လာသည်။ အစွန်ဆုံးမှာ ထိုင်နေသည့် မိန်းကလေးကို နားနားကပ်၍ တိုးတိုး ပြောသည်။ မိန်းကလေးက ကိုလှိုင်မြင့်ဘက် လှည့်၍ နားနားကပ်၍ […]